Onyinye IWCA Dissertation Grant - International Writing Centers Association
Kwa afọ na Eprel 15.
Writtù Na-ede Akwụkwọ Ọgụgụ Mba Nile (IWCA) na-enye aka iwusi obodo etiti ide ihe ike site na ọrụ ya niile. Nzukọ ahụ na-enye Onyinye IWCA Dissertation Research Grant iji kwado ụmụ akwụkwọ doctoral ka ha na-arụ ọrụ na ederede ederede metụtara etiti. Ebumnuche a bụ iji kwụọ ụgwọ mmefu nke ụmụ akwụkwọ mmụta doctoral na-arụ ọrụ iji mezuo akwụkwọ nyocha na akara ugo mmụta doctoral. Enwere ike iji ego ahụ maka mmefu obibi; onunu, ngwa na sọftụwia; ịga saịtị nyocha, igosipụta nyocha, ma ọ bụ ịga ọgbakọ ma ọ bụ ụlọ ọrụ dị mkpa maka ọrụ ahụ; na ebumnuche ndị ọzọ ekpuchighị ebe a kama ọ bụ nkwado nke nwa akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na-agụsị akwụkwọ. Studentsmụ akwụkwọ doctoral nwere olile anya akwadoro ma nọ na ọkwa ọ bụla nke nyocha / ide ihe karịa olile anya na-agba ume itinye.
Onyinye nnata ga-enweta $ 5000 nyocha site na IWCA n'elu nhọrọ dị ka onye mmeri ahụ.
Ekwesịrị itinye akwụkwọ anamachọ a site na oge achọrọ achọrọ site n'aka IWCA Otu ụzọ. Ngwa ngwugwu zuru ezu ga-enwe ihe ndị a na faịlụ pdf:
Akwụkwọ edemede na-agwa onye isi onyinye na-ere ugbu a na-ere kọmitii ahụ maka uru ga-esi na nkwado ego. Karịsịa, leta ahụ kwesịrị ime ihe ndị a:
Rịọ maka IWCA tụlere ngwa ahụ
Gwa onye choro ya na oru ya
Ndepụta atụmatụ maka ịmecha ọrụ ahụ
Akwụkwọ ozi edemede abụọ: Otu sitere na onye nduzi nyocha na otu onye sitere na onye nke abụọ na kọmitii nyocha.
Gaanụ na IWCA, na-elekọta Kọmitii Enyemaka, mbipụta nke akwụkwọ ma ọ bụ ihe ngosi
Debanye akụkọ banyere ọganihu na IWCA, na-elekọta oche ndị enyemaka, ga-akwụ n'ime ọnwa iri na abụọ nke nnata ego.
Mgbe ị rụchara ọrụ ahụ, nyefee akụkọ ikpeazụ nke ọrụ na PDF nke akwụkwọ nyochachara nke a na Kọmitii IWCA, na-elekọta Kọmitii Kọmitii Enyemaka.
Jiri nlezianya tụlee ịnyefe ihe odide dabere na nyocha a na-akwado ya na otu n'ime akwụkwọ ndị mmekọ IWCA: Akwụkwọ Ederede Center, ma ọ bụ Nyocha Ọgbọ. Dịrị njikere iso ndị nchịkọta akụkọ na ndị nyocha na-arụ ọrụ iji degharịa ihe odide ahụ maka mbipụta ọ ga-ekwe omume
2021: Yuka Matsutani, "Ịgbanwe ọdịiche dị n'etiti Theory na Practice: Mkparịta ụka Nyocha Nyocha Ntuziaka maka Mmekọrịta na Nkuzi Nkuzi na Ụlọ Akwụkwọ Ide Ihe na Mahadum"
2020: Jing zhang, “Ikwu okwu banyere ide ihe na China: Kedu ka Centlọ Ọrụ Ide Ihe Si Na-egbo Mkpa Studentsmụ akwụkwọ China?”
2019: Lisa Ukwuu, "Ọzụzụ ndị nkuzi na Scaffold na L2 Ndị edemede: An Action Research Writing Center Project"
2018: Lara Hauer, "Lingzọ Mbugharị Na-aga Ntugharị Na-amụ Multilingual Writers na College Writing Centers" na Jbụ Newman, "Oghere dị n'etiti: Ntị na Ndịiche na Community na Mahadum Writing Center Sessions"
2017: Katrina Bell, “Onye Nkuzi, Onye Ozizi, Ọka mmụta, Onye Nchịkwa: Echiche nke ndị ndụmọdụ na ndị gụsịrị akwụkwọ na ndị gụsịrị akwụkwọ ugbu a”